कविता : सहर गायब भएपछि- साहित्य/विविध - कान्तिपुर समाचार
वैशाख २१, २०७७ शिवानीसिंह थारू
एकाएक सहर गायब भएपछि, सडकहरू चौबाटोमा जम्मा भए
छाँया कुल्चिहिँड्‍ने मान्छेहरू
एकाएक हल्ला साम्य भएपछि
ट्राफिक लाइटहरू हरियै सुसेल्न थाले
कता पुगे ?
हतार बोकी हिँड्‍ने स्वाँफ्वाँहरू
एकाएक तँछाडमछाड सुस्ताएपछि
जेब्राका क्रसहरू खुट्टा तन्‍काउन थाले
किन रोकिए ?
वारपार गरिहिँड्‍ने पाइतालाहरू
जवाफ न दोबाटोसित थियो
न ‘वन वे’ सित
न ‘टु वे’ सित
सहरको बुढो गल्ली खोक्दै आयो
र भन्न थाल्यो,
छाँयासहित, पाइलासहित, हतारसहित
मावनवता खोज्‍न थुनिए !
प्रकाशित : वैशाख २१, २०७७ १४:२०
सीमामा अझै लुकीछिपी आउजाउ
प्रदेश ५ मा लकडाउनका बेला भारतबाट आएका २५ हजारमध्ये ५ हजारजति मात्रै क्वारेन्टाइनमा
वैशाख २१, २०७७ अमृता अनमोल
बुटवल — भारतसँग सीमा सिल गरिए पनि लुकीछिपी आउजाउ जारी रहँदा प्रदेश ५ मा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण मुस्किल देखिएको छ । रूपन्देही र बाँकेमा २ जनामा संक्रमण पुष्टि भएपछि स्थानीय थप त्रासमा छन् ।
प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बराल धेरै भूभाग भारतीय भूमिमा जोडिएकाले जोखिम बढिरहेको बताउँछन् । ‘रोक्दारोक्दै र छेक्दाछेक्दै पनि नागरिक यताउता गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यो सबैभन्दा ठूलो जोखिम हो ।’
प्रदेश ५ का ६ जिल्ला भारतसँग जोडिएका छन् । जहाँ खोल्सा, खेतका कान्ला र ढिकले सीमा छुट्ट्याइएको छ । ४ सय ८ किमि सीमाक्षेत्रमा ३५ ठाउँमा मात्र जाँच गर्ने हेल्प डेस्क छन् । यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै लकडाउनमा पनि भारतीय भूमिबाट लुकीछिपी मानिस आएका छन् ।
लकडाउनपछि मात्रै २५ हजार नागरिक प्रदेशमा भित्रिएका छन् । तीमध्ये करिब ५ प्रतिशत मात्रै क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् । अरू घरमै छन् । मन्त्री बरालले जोखिम क्षेत्रबाट आएकाले सबैको कोरोना परीक्षण गर्ने बताए । ‘उनीहरूको नाम, ठेगाना र फोन नम्बर थाह छ । स्थानीय तहबाट खोजी भएको छ,’ उनले भने, ‘अबको पहिलो लटमा ती २५ हजार सबैको कोभिड–१९ परीक्षण हुनेछ ।’
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार यहाँको क्वारेन्टाइनमा ११ हजार ८ सय ९५ जना छन् । उनीहरूमध्ये पीसीआर र आरडीटी गरी ५ हजार जनाको मात्रै कोरोना परीक्षण गरिएको छ । २ सय ४५ जनाको स्वाब संकलन गरिएको छ । जनशक्ति र उपकरण अभावमा परीक्षणको गति सुस्त छ । प्रयोगशालाको क्षमताअनुरूप परीक्षण गर्न नसक्दा पछिल्लो समय संकलित स्वाब काठमाडौं पठाउने गरिएको छ ।
समयमै कोरोना परीक्षण नभएपछि क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरू त्यत्तिकै घर फर्किएका छन् । प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशक डा. विनोद गिरीले अब कोरोना परीक्षणको गति बढ्ने दाबी गरे । ‘भीटीएम अभावले परीक्षणमा केही ढिलाइ भएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले एक हजारजति आएको छ । अरू आउने क्रममा छ । अब पीसीआर परीक्षण रोकिँदैन ।’
प्रदेशका रूपन्देही, बाँके र दाङमा पीसीआर ल्याब सञ्चालनमा छ । जसबाट दैनिक २०/२० वटा नमुना मात्रै परीक्षण हुने गरेको छ । किट र जनशक्ति अभाव रहेको प्रयोगशाला अब क्षमताअनुसार चल्ने गिरीले दाबी गरे ।
सशस्त्र प्रहरीले दुई दिनयता सीमा छुट्ट्याउने खोल्सा, कान्ला र ढिकमा पनि गस्ती थालेको छ । तर, उनीहरूको आँखा छलेर मानिस आउने क्रम रोकिएको छैन । सामाजिक विकासमन्त्री बरालले सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई अपरिचित वा जोखिम क्षेत्रबाट आएको जो–कोहीलाई क्वारेन्टाइनमा लैजान सचेतना फैलाइएको बताए । ‘स्वास्थ्य परीक्षण त छँदै छ,’ उनले भने, ‘नागरिकमा सुरक्षा र चेतना फैलाए मात्र पनि प्रदेशमा खुला सीमाबाट कोरोना भित्रनबाट बच्न सकिनेछ ।’
प्रकाशित : वैशाख २१, २०७७ १४:१३